Tombon-tsoa MC nylon |
Ny tsorakazo nilona MC, fantatra koa amin'ny hoe rod nylon, dia karazan-kazo an-idina, c6h11no, izay akora vita amin'ny vy, izay mampiasa akora fototra ho toy ny catalyst. Ny tsorakazo sy ny mpikatroka MC nylon ary ny additives hafa dia namboarina ho monomer ho lasa polymerisé mivantana any anaty lasitra preheated amin'ny mari-pana sasany. Ny fitaovana dia vita amin'ny polymerika haingana ao anaty lasitra ary miharo amin'ny embryon mafy orina. Aorian'ny fitsaboana mifanaraka amin'izany dia azo ilay bar efa voatondro. "Plastika fa tsy vy, fampisehoana tena tsara", be mpampiasa. MC nylon tehina dia vita amin'ny fotsy, mainty, manga, maitso, beige lovia ary nylon. Ny tsorakazo nilona dia manana fitoniana simika tsara: tsy voan'ny simika, toy ny alikaola, ny fotony malemy, ny varahina, ny estera ary ny diloilo hydrocarbon. Ny tsorakazo nilona dia manana fanoherana mangatsiaka sy hafanana tsara: ny hafanan'ny fanoherana ny hafanana dia 80-100c, ary afaka mifikitra amin'ny tanjaka mekanika sasany amin'ny - 60C.
Ny fiasan'ny mekanika dia tena tsara ihany koa: ary manana fihenjanana avo, hamafin'ny tany, tanjaka hiondrika sy tanjaka ary fihenan-dàlana avo lenta, mety amin'ny singa lehibe ao an-trano, be mpampiasa amin'ny milina famokarana indostrialy, fitaovana, faritra elektrika. Ny ampahany, toy ny bearings, gears, impellers pump, blades fan, gasket tahan'ny solika, faritra misy valizy, zava-pisotro sy masinina sakafo, dia vita amin'ny fanoherana maharitra, tsy mahazaka fiantraikany, tsy lakaoly, fitaovana fidiovana sy tsy misy poizina hanaovana worktables, mampita visy, mora diovina, lava fiainana, effet anti-agila, ary azo ampiasaina ho fanafody fitsaboana hafa, anarana bushing, sns.
MC nylon tehina dia manana henjana tsara, fanoherana fanoherana, fanoherana solika, fanoherana ny seismika, hery mihosin-doha sy miondrika, fidiran'ny rano ambany ary fitoniana lehibe amin'ny lafiny. Izy ireo dia ampiasaina handrindra ireo faritra mateza mitafy tanjaka isan-karazany. Ny vokatra dia manana rindrambaiko isan-karazany. Izy io dia plastika sy vy, vy, varahina ary fitaovana vy hafa. Izy io dia fitaovana mekanika manan-danja amin'ny fandefasana plastika amin'ny laoniny nylon, tsy mitafy faritra, tsy varahina sy firaka, satria ny fitaovan'ny fitaovana no ampiasaina. Toy ny turbine, gear, bear, impeller, crank, panneaux instrument, solifara, volo ary visy, valizy faneriterena, mpanasa lamba, visy, voanjo, tombo-kase, fivezivezena sy tanany, ny mpampitohy tanany dia azo atao amin'ny tehin'ny MC nylon.